Fankatoavan-dalàna ao amin'ny parlemanta :: Mihenjan-droa tanteraka ny tady eo amin’ireo depiote sy ireo loholona • AoRaha
Fankatoavan-dalàna ao amin’ny parlemanta Mihenjan-droa tanteraka ny tady eo amin’ireo depiote sy ireo loholona
Nanao fanamba­ràna manakiana mafy an’ireo loho­lona ihany koa ireo depiote eny Tsimbazaza. Notondroin’ izy ireo ho mpisompatra ny fampandehanan-draharaham-panjakana ireo loholona miara-dia amin’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, izay nitsipaka ny fankatoavana an’ireo hitsivolana noraisin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry.
Nohizingizinin’i Velontsara Paul Bert, filohan’ny vondro­na parlemantera miaraka amin’ ny Prezidà Andry Rajoelina (IRD), fa: “fihetsika tsy tompon’ andraikitra no asehon’ireo loholona”. Nambarany anefa fa tsy maintsy hiroso amin’ ireo dingana rehetra mifana­raka amin’ny lalàna ho fampa­nanan-kery tanteraka an’ireo hitsivolana ireo ny vondrona IRD na misy aza ny sakantsa­kana ataon’ny antoko Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM). “Tsy maintsy tanteraka ny vinan’ny Filohan’ny Repo­blika”, hoy izy teny Tsimba­zaza, omaly tolakandro.
Hitsivolana telo amin’ireo sivy noraisin’ny Filoha no nankatoavin’ireo loholona etsy Anosikely. Isan’izany ny hitsivolana momba ny politikam-pirenena mikasika ny sarimihetsika; ny tahirim-bola ho an’ny fanamboaran-dalana ary ny fananganana ny sampan-draharaha mpiahy ny fikojakojana ny lalana. Notsipa­hin’izy ireo kosa ny fankatoavana an’ireo hitsi­volana miisa enina, izay nankatoavin’ny Antenimirempirenena fanindroany teny Tsimbazaza, omaly.
Amin’ny alahady izao no hifarana tanteraka ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny parlemanta nodidian’ny gover­nemanta hankatoavana an’ ireo hitsivolana noraisin’ny Filohan’ny Repoblika miisa sivy ireo. Raha toa ka mbola lavin’ny Antenimierandoho­lona fanindroany ireto hi­tsivolana ireto dia tsy maintsy hiroso amin’ny fananganana komity iraisan’ny parlemanta handinihana fanintelony an’izany ny governemanta. Raha mbola tsy mitovy ihany ny hevitra dia anjaran’ny Antenimierampirenena no manapaka farany amin’ny fankatoavana na tsia an’ireo hitsivolana enina sisa ambiny.
Notsipihin’i Keron Idealson, filohan’ny vaomiera misahana ny lalàna ao amin’ny Antenimierampirenena anefa fa:“efa lalàna manan-kery ireo hitsivolana ireo ary efa nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny fampiharana azy”.
“Fanarahana an’ireo dingana takian’ny lalàna ihany no andrasana, ka tsy tokony hisy intsony ny adihevitra momba an’izany”, hoy izy.
Isan’ireo tonga nanotrona an’ny vondrona parlemantera Ird teny Tsimbazaza ihany koa ireo solontenan’ny Vondrona parlemantera
Fivoaran’ny andro ratsy ::Tandindonin’ny rivo-doza ny faran’ny herinandro